आज भदौ ५ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्दै दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
Homeराशिफलआज भदौ ५ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्दै दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
August 21, 2020 admin राशिफल 13751
समाजसेवाको कार्यमा ध्या’न जानेछ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। समाजसेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्नेछ। बौद्धिक चि’न्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ।परिवारमा खुशी छाउनेछ।माया प्रेमको बन्धन थप सुमधुरता बढेर जानेछ । आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
झैझ*गडा र वि*वादमा सरिक हुनु पर्नेछ । पठन–पाठ’नमा केही धमिलोपन आउने छ । सोचे’र बोल्नु होला। स्वास्थ्यमा बिशेष ख्याल राख्नु होला । जोश जाँगर र हिम्मत घट्नेछ । आजको शुभ अंक २,७ र १२ रहेको छ।
आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातला’गी हुने समय छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। परिवारमा खुशी छाउनेछ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।माजमा लो’कप्रिर्य काम गरि नाम’ कमाउँन सकिनेछ ।कानले धो’का दिन सक्छ राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु होला। गुप्त शत्रु बढ्न सक्छन । आजको शुभ अंक ३ र ६ रहेको छ।
मनमा सन्तुष्टि रहने छ। बो’लिले साथ दिने छ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सहयोगी हातहरू अघि बढ्नेछन् । पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा सम’झदारी बढ्ने योग छ।आज तपाइको घा’तक बार रहेको छ त्यसैले नया काम को सुरु’वात नगर्नुहोला। आजको शुभ अंक २ र ४ रहेको छ।
मनमा सन्तुष्टि रहने छ।आय’आर्जन बढ्ने छ । उठ्नु’पर्ने रकम हातलागी हुने समय छ।पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ।पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।नया काम को सुरु’वात नगर्नु होला। आजको शुभ अंक १र ५ रहेको छ।
नया कामको सुरुवात नगर्नु होला। झैझ’गडा हुने सम्भावना छ। अ*प्रिय समाचारले दुःखी बनाउन सक्छ।यात्रा घा’तक बन्न सक्छ । अनावश्यक कार्यमा पैसा खर्चहुन सक्छ। आजको शुभ अंक ३ र ६ रहेको छ।
बिभिन्न ठाउबाट लाभ मिल्ने छ।लगानि बाट सन्तु्ष्टि मिल्ने छ। बौद्धिक चि’न्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। परिवारमा खुशी छाउनेछ। आजको शुभ अंक २ ,७ र १२ रहेको छ।
आटेको काम पुरा हुनेछ। लगा’निबाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुनुको साथै पति पत्निबि’चको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जाने’छ ।पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। सम्मानित हुने योग रहेकोछ । आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
धर्म कर्ममा मन जा’नेछ । सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । समाजसेवामा अरुको मन जित्ने सम्भावना रहेकोछ ।मा’या प्रेममा विस्वास सिर्जना हुनेछ।सपना पुरा हुने योग छ। साला सालि सँग भेट हुने योग छ। आजको शुभ अंक ४,९ र १२ रहेको छ।
दण्ड तथा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन स’क्छ ध्यान दिनुहोला ।गाडि चलाउ्दा बिशेस ध्यान दिनुहो’ला। झैझ’गडा हुनेसम्भावना छ।यात्रा घा’तक बन्न सक्छ ।राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु हो’ला।नया काम को सुरुवात नगर्नु होला।पानि धे्रै पिउनु होला। बिदेशको योग रहेको छ। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
मन मा सन्तुष्टि रहने छ। बो’लि ले साथ दिने छ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। आज नया काम को सुरुवात नगर्नु होला।सम्मा’नित हुँने योग रहेकोछ । समाजसेवामा मन जानेछ ।आय बढ्ने छ। पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधु’रता बढेर जानेछ ।माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुनेछ। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
घर तथा जमिन जो’ड्ने योग रहेको छ। व्यापार व्याव’सायमा लगानि हुँने योग रहेकोछ । माया प्रेमको बन्धन थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।जस मिल्ने योग छ तर शत्रु हरु बलिया हुने छन। खाने कुरा मा ध्यान दिनु होला। पेट को स’मस्या हुने छ। आजको शुभ अंक ४ ९ र १२ रहेको छ।
विजय साहिको परिवार ए’क्कासी मिडियामा, सबै नेपाली खु’शी हुने यस्तो छ स’न्देश (भिडियो हेर्नुहोस…)
बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न कालिकोट पुगे नायक पल शाह
आज भदौ ६ गते शनिबार को राशिफल हेर्नुहोस्
August 22, 2020 admin राशिफल 12952
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । पारि’वारिक कलहको सम्भाव’ना छ । स्वास्थयमा सम’स्या देखिन सक्छ । वैदेशिक यात्राको योग छ । बृष – इ, उ, ए,
आज मिति २०७८ साल बैशाख १० गते शुक्रबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
April 23, 2021 admin राशिफल 4422
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रतिश्पर्दीहरु सवल रहनाले कार्यसम्पा’दनमा बिषेश साबधान रहनु पर्ने समय रहेकोछ । बिश्वा’सिला ब्यत्तिहरुबाट धोकाहुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त
यस्तो छ तपाईको आइतवारको राशिफल, पाथिभरा माताको दर्शन गरी वैशाख १२ गतेको राशिफल हे’र्नुहोस्
April 25, 2021 admin राशिफल 4320
मेषः पढाई लेखाईमा ध्यान के’न्द्रित हुनेछ भने मेहनेत गर्दा महत्वपुर्ण उपलब्धि हासि’ल गर्न सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन रहने हुनाले पद पाप्तिको गति’लो योग रहेकोछ । नयाँ काम पाउने तथा गरिरहेको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243682)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231240)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230969)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229282)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229208)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228222)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228093)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227603)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (197254)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195567)